जनरल विपिन रावत सवार हेलिकप्टर दुर्घटना : हेलिकोप्टर दुर्घटनामा प्रत्यक्षदर्शीले के के देखे ? - ramechhapkhabar.com
जनरल विपिन रावत सवार हेलिकप्टर दुर्घटना : हेलिकोप्टर दुर्घटनामा प्रत्यक्षदर्शीले के के देखे ?
‘मैले एकजना व्यक्तिलाई मात्रै देखेँ । उनी जलिरहेका थिए र त्यसपछि उनी तल खसे । म आत्तिएँ ।’ यो जानकारी कृष्णास्वामीले दिएका हुन् । उनी बुधबार भएको उक्त हेलिकोप्टर दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हुन् जसमा भारतका पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सिडिएस) जनरल बिपिन रावतको मृत्यु भयो ।
‘बिस्फोटले बिजुलीको पोलसमेत हल्लिएको थियो । रुख उखेलिए । के भयो भनेर हेर्दा धुँवा आइरहेको थियो । यसले पूरा इलाका ढाकेको थियो । रुखको माथितिर आगोको लप्का देखिएको थियो । मैले आफ्नो आँखाले एकजना व्यक्तिमात्रै देखेँ । उनी जलिरहेका थिए, त्यसपछि उनी तल खसे । म आत्तिएँ । म दौडदैं फिर्ता भएँ, छिमेकीलाई दमकल र प्रहरी बोलाउन भनेँ । केही समयपछि अधिकारी पनि आए । त्यसपछि मैले शवलाई लगेको देखिनँ । म आत्तिएको थिएँ । घर आए र पल्टिएँ ।’
जनरल रावत र उनकी श्रीमतीसमेत १४ जना भारतीय वायु सेनाको एमआई–१७ भी५ हेलिकोप्टरमा सवार थिए । यो हेलिकोप्टर तमिलनाडुको कुन्नुरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
यो हेलिकोप्टर सुलुरको आर्मी बेसबाट निस्किएको थियो र जनरल रावतलाई लिएर वेलिङ्टन सैन्य क्याम्पतर्फ अघि बढिरहेको थियो ।